Knowledge Archives - Page2of 77 - Sone Lin
Knowledge November 25, 2021
ပြည်သူတွေရဲ့ နှလုံးသားထဲက ဘွန်း
NUG ငွေတိုက်စာချုပ်များ သည် စတင် ရောင်းချသည့် နေ့မှာပင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆.၃ သန်း (စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ ၈.၆ သန်း) ရရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်ဟု အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ အဖွဲ့မှ ကြေညာခဲ့သည်။ လောလောဆယ်တွင် ပြည်ပရှိ မြန်မာ နိုင်ငံသားများ ထံမှ လွတ်လပ်သော ဘဏ်လုပ်ငန်း စနစ်ကို အသုံးချ၍ ဝယ်ယူ နိုင်ခဲ့ကြခြင်း ကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ စတင်ရောင်းချသည့်…
စစ်ကောင်စီ၏ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ
“ဒီကောင်တွေကို ပစ်ထား၊ ငြိမ်သွားအောင် အကုန်သတ်၊ ငြိမ်သွားရင် နိုင်ငံတကာက သူ့အလိုလို ငါတို့နဲ့ ဆက်ဆံ လာလိမ့်မယ်” ဟူသော အတွေးများဖြင့် နိုင်ငံတွင်း ဆန္ဒပြပွဲများ အရှိန်အဟုန် မြင့်တက်လာနေချိန်တွင် ယဉ်ကျေး သော ကမ္ဘာ လူအဖွဲ့အစည်းဝင်များ အားလုံး တုန်လှုပ်ချောက်ချား သွားမတတ် ရာဇဝတ်မှုကြီးများကို ကျူးလွန် လာခဲ့ကြသည်။ ထို့အတွက် စစ်အာဏာသိမ်း အဖွဲ့သည် တနိုင်ငံလုံးတွင် မမြင်ရသော ရန်သူများ ပတ်လည် ဝိုင်းခံလာနေရပြီ ဖြစ်…
အာဆီယံ-တရုတ် အစည်းအဝေးမှာ ချောင်းကြည့်ပေါက်ကိုပါ အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ စစ်ကောင်စီ
” လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ပြီး တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ မြန်မာစစ်ကောင်စီကို တရားဝင်မှု့အတွက် ပေကျင်း ( တရုတ် ) ရဲ့ ကြိုးစားမှု့ဟာ အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုပါ ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်ဖို့ အားထုတ်နေတာပါ ။ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ဒေသတွင်း အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုပါ ထိခိုက်နေပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာ အာဆီယံစည်းကမ်းအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလွန်အားကောင်းတဲ့ ချဉ်းကပ် ၊ အားထုတ်မှု့တစ်ခုနဲ့ ကမ္ဘာကို ပြသရမှာပါ ။ ” လို့ မလေးရှားဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမတ်နဲ့…
Knowledge November 22, 2021
ပညာတတ် NUG ကို အာဆန်က ဖိတ်တယ်ဆိုတာ ဘောလုံးစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် ခြေစမ်းကန်ခိုင်းကြည့်တဲ့ သဘောပဲ
ပညာတတ် NUG ကို အာဆန်က ဖိတ်တယ်ဆိုတာ ဘောလုံးစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် ခြေစမ်းကန်ခိုင်းကြည့်တဲ့ သဘောပဲ ဆွေးနွေးရန်မရှိ နဲ့ လုံးဝအုပ်ချုပ်၍ မရှိစေရ ဒီအချိန် ဘာမှ လုပ်မရသေးတဲ့ ရာသီဥတုဆွေးနွေးပွဲအတွက် NUG ကို အာဆန်က ဖိတ်တယ်ဆိုတော့ ခြေလှမ်းစကြည့်တဲ့သဘောနဲ့ ဘောလုံးစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် ခြေစမ်းကန်ခိုင်းကြည့်တဲ့သဘောပဲ သို့ပေမယ့် တက်ရောက်မည့် သူက Dr.တူးခေါင် လူငယ်ပြီး ထက်မြတ်တဲ့ တနည်း နိုင်ငံတကာကလူတွေကို လယ်ဗယ်ယှဉ်နိုင်ပြီး စစ်အာဏာရှင်တွေကိုပါ နှာနုဖြတ်ရိုက်နိုင်မည့် ပညာတတ်သူ…
NUG ၏ငွေတိုက်စာချုပ် ဝယ်ယူရန်အတွက် သိထားသင့်သောအချက်များ
အထူးငွေတိုက်စာချုပ် (Bond) ဆိုတာ အစိုးရတစ်ရပ်က လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေ လုပ်ဖို့ လိုငွေ ရှိလာတဲ့အခါမှ အစိုးရက ပြည်သူ့ဆီက ခေတ္တချေးယူ တဲ့ စာချုပ်ပါပဲ လို့ အရိုးရှင်းဆုံးပြောရင် ရပါတယ်။ အဲ့တော့ ငွေချေးတယ်ဆိုတဲ့ သဘာဝအတိုင်း တခြားအစိုးရတွေကတော့ တနှစ်ကို ဘယ်လောက်ဆိုပြီး အတိုးသတ်မှတ်ပေးတယ်။ အခု NUG က ထုတ်ရောင်းမဲ့ အထူးငွေတိုက်စာချုပ်များ (Bond) ကတော့ တော်လှန်ရေး ကာလမို့ အတိုးပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂နှစ်ပြည့်သွားလို့…
Knowledge November 21, 2021
PDF တွေ အားကောင်းလာတာနဲ့အတူ စစ်ကောင်စီဖက်က မျက်ကလူးဆံပြာ ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ဘွင်းဘွင်းကြီးမြင်နေရပြီ
PDF တွေ အားကောင်းလာတာနဲ့အတူ စစ်ကောင်စီဖက်က မျက်ကလူးဆံပြာ ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ဘွင်းဘွင်းကြီးမြင်နေရပြီ စစ်တိုက်ရင်ဘယ်တော့မှ မညှာနဲ့ PDF တွေ အားကောင်းလာတာနဲ့အတူစစ်ကောင်စီဖက်က မျက်ကလူးဆံပြာ ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ဘွင်းဘွင်းကြီးမြင်နေရပြီ။ ဥပမာ – မြို့ပြတွေမှာ လုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဆိုရင် …ခြေလျင်ခြေမြန်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေသိပ်မတွေ့ရပဲ …. တစ်သက်လုံး စစ်မတိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အကူလက်ရုံးတပ်သားတွေကိုပဲ ထုတ်သုံးလာတဲ့အထိပါ။ ဒီလိုပြောတဲ့အခါ..ခင်ဗျားကသာ ….စစ်ကောင်စီက ပျာ နေပြီလို့ပြောနေတယ်..တစ်နေ့တစ်နေ့PDF တွေချည်းပဲဖမ်းခံနေရတာကျတော့ခင်ဗျား ဘာပြောမလဲ လို့ပြန်မေးခွန်းထုတ်ကြပါလိမ့်မယ် ဟုတ်ကဲ့ … တော်လှန်ရေးအစမှာ…
၁၀ တန်းကို ၂၄၀ နဲ့ အောင်တော့ ဘာဖြစ်လဲ? ဘာမှ မဖြစ်ဘူးလေ ၁၀ တန်းကို အမှတ်နည်းနည်းနဲ့ အောင်ပြီး အသက် ၃၀ မပြည့်ခင်မှာပဲ သိန်း ၂ သောင်းလောက် ချမ်းသာနေတဲ့ လူငယ်လေး အကြောင်း မဖတ်ဖူးဘူးလား? သူ ၁၀ တန်း အောင်တော့ လက်ရှိ ရေပန်းစားနေတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတက္ကသိုလ် တွေကို တက်ဖို့ အမှတ် မမီခဲ့ဘူး။ သူ့မိဘက အားပေးတယ်…
Knowledge November 20, 2021
ကားမောင်းသင်ခါစသူများ (သို့) ကားမောင်းတတ်ခါစ သူများအတွက် Manual Gear အခြေခံမောင်းနှင်နည်း
ကားေ မာင်း သင်ခါစသူများ (သို့) ကားမော င်းတတ်ခါစ သူများအတွက် ဗဟုသုတနဲ့ အခြေခံနားလည်ရန် ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Manual gear ကား များတွင် ခြေနင်း ၃ ခု ပါဝ င်ပါသည်။ ညာဘက် အစွန်သည် Accelerator Pedal (လီဗာ)၊ အလယ်သည် ဘရိတ်၊ ဘယ်ဘက်ကတော့ ကလပ်ပဲ ဖြ စ်ပါတယ်။ ဘရိတ်နဲ့ လီဗာကို ညာခြေဖြင့် သုံးရမည်ဖြစ်ပြီး…
Fb ပေါ် မှတ်တမ်းအဖြစ် တင်သင့်ပါတယ်လို့ပဲ ဖြေချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဟိုး ယခင်ကဆို ကုသိုလ်ပြုပြီးတိုင်း ကြေးစည်တီးကြပါတယ်။ ကြေးစည်သံကို ကြားရရင် အိမ်နီးနားချင်းတွေက အမျှပေးဝေတာပဲဆိုတာ သိရှိပြီး သာဓုခေါ်ကြတယ်။ ယခုခေတ်မှာတော့ မိမိကုသိုလ်ပြုပြီးတိုင်း Fbပေါ် တင်ကြတာဟာ… မိမိကုသိုလျကို အမျှပေးဝေကြခြင်းပါပဲ။ သာဓုခေါ်လိုက်ပါ။ မိမိလဲ ကုသိုလ်ရပါတယ်။ ကြွားဝါတာပါဆိုပြီး နှလုံးသွင်း မမှားပါစေနဲ့။ သူတစ်ပါး ကုသိုလ်က သင့်အတွက် အကုသိုလ်ဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါ။ ( မိမိရဲ့ ကုသိုလ်တွေကို…
ကုန်းဘောင်မင်းဆက် ၈ ဆက်မြောက်မင်းဖြစ်သူ သာယာဝတီမင်း (ခေါ်)ကုန်းဘောင်မင်း(ခေါ်) ရွှေဘိုမင်း မှာ စိတ်နောက်သွားသော မင်း အဖြစ် ထင်ရှားသည်။ ငယ်အမည်မှာ မောင်ခင် ဖြစ်သည်။ နောင်တော်ဘကြီးတော်မင်းကို ပုန်ကန်ပြီး ထီးနန်း ရယူ ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ပုန်ကန်ရခြင်းမှာ နောင်တော် သည် စိတ်မကျန်းမမာဖြစ်နေသည်ကတစ်ကြောင်း၊ နန်းတွင်း မှာ နန်းမတော်မယ်နု နှင့် သူမအကိုဖြစ်သူ မင်းသားကြီး မောင်အိုတို့က ခြယ်လှယ်ချင်သလို ခြယ်လှယ်နေကြ သည်က တစ်ကြောင်းဖြစ်သော ကြောင့်…